Sida sawir loogu rogo sawir | War gadget
Qolka Ignatius | | Software
Dhowr sano hadda, kaamirooyinka casriga ahi waxay u yimaadeen inay sii joogaan oo ay gabi ahaanba iska fogeeyaan kamaradaha is haysta. Xaqiiqdii, haddii aan hadda aadno dukaan si aan u aragno moodooyinka ay haystaan, midkoodna hadda ma joogo, in kastoo ku habboon baahiyaha adeegsadayaal fara badan oo leh hawlo ay ka mid yihiin Wifi, Bluetooth iyo suurtagalnimada ku xirnaanta internetka si toos ah loogu dhajiyo sawiradeena shabakada bulshada ee aan ugu jecel nahay. Nolosheena oo dhan waxay u badan tahay in hadii aan jecelnahay sawir qaadista aan awoodi doonno inaan ku qabsanno kamaradeena tiro badan oo daqiiqado ah oo aan jeclaan laheyn inaan balaarino si aan ugu raaxeysano ama isu badalno nooc ka mid ah rinjiyeynta dhuxusha, oo leh midab biyo leh, khad ...
Laakiin haddii aan nahay isticmaaleyaal waqti ka waqti jecel inaan sawirro ka qaadno xilliyadooda gaarka ah, hadday tahay dhalashooyinka, aroosyada, safarada ama nooc kasta oo dhacdo ah oo aan jecel nahay inaan xusuusteeda ku hayno, waxay u badan tahay in qaar ka mid ah kuwaas oo dhan ay qiiro ku hayaan ku filan inaad rabto inaad u beddesho rinjiyeyn, sida haddii ay ka soo baxday gacantayada. Labadaba kiiskan iyo kii horeba, natiijadu waa isku mid oo waxaan dooran karnaa inaan aadno dukaanka rinjiga oo aan qarash gareyno iibsashada dhammaan walxaha aan u baahan doonno si aan awood ugu yeelano inaan ku qabanno sawirrada shiraac.
Ama, waxaan isticmaali karnaa codsiyo kala duwan oo ah waxay noo oggolaanayaan dhawr tallaabo oo keliya si aannu sawirrada aannu ugu jecel nahay ugu rogo sawirro cajiib ah, oo aan gadaal ka daabacan karno oo aan qaabeyn karno si aan ula wadaagno dhammaan dadka gurigeenna yimaada ama u siiya kuwa aan jecel nahay. Codsiyada lagu sawiri karo sawirradeena waxaa laga heli karaa nidaamyada hawlgalka ee moobilka iyo desktop-ka. Maqaalkani waxaan ka hadlaynaa codsiyada ugu fiican ee mid kasta oo ka mid ah nidaamka deegaanka: Windows, macOS, iOS iyo Android. Codsiyada aan u xushay maqaalkani waa kuwa helay dib u eegista ugufiican dukaankooda, sidaas darteed waa tilmaan cad oo ku saabsan tayada ay na siinayaan.
1 U beddelo sawir sawir Windows
1.3 Khaanad sawir
2 U beddel sawir sawir leh macOS
3 U beddel sawir sawir leh Photoshop
4 U beddelo sawir sawir shabakadda
5 U beddel sawir si aad ula sawirto macruufka
6 U beddel sawir sawir leh Android
6.3 Sawirka Sifeeyaha Farshaxanka
U beddelo sawir sawir Windows
Akvis Sketch waa mid ka mid ah codsiyada ugufiican ee loogu badalo sawiradeena qalin ama sawir biyo midab leh, taas oo noo ogolaaneysa inaan helno natiijooyin aad u fiican midab ama madow iyo cadaan tan iyo ku dayashada farsamada garaafka iyo midabka midabka leh iyo farsamada diirta iyo midabbada. Isku xirka arjiga ayaa ah mid aad u fudud, maadaama mar haddii sawirka la farsameeyay aan adeegsan karno farsamooyin kala duwan si aan ula jaanqaadno natiijooyinka aan helnay, kordhinta hadhka, hagaajinta u janjeedhka khadadka ... waxay si dhakhso leh ugu rogi kartaa sawirradeenna qalin ama sawir-biyood midab leh.
Akvis Sketch waa codsi la bixiyay oo qiimihiisu yahay 68 euroQaab codsi ah ama qaab plugin ah oo loo yaqaan 'Photoshop', waa qiil qiil loo heli karo haddii aad si xirfadle ah ugu dadaasho tan. Dabcan, kahor intaadan iibsan arjiga, horumariye wuxuu na siinayaa suurtagalnimada soo dejiso nooc tijaabo ah si aan u hubino inay ku habboon tahay baahiyaheenna iyo in kale.
Haddana horumariyaha Akvis wuxuu na siinayaa codsi kale sawirada aan jecel nahay u rogno saliid, biyo-biyo, gouache, qalin, khad, dhaldhalaal, ama shiraac linen diiran. Sida aan arki karno, waxay si toos ah noo siisaa nooc kasta oo rinjiyeyn ah oo aan u baahan karno inaan sawirradayada ugu rogo sawirro heer sare ah si aan hadhow ugu daabacno iyaga oo cabbir ballaaran leh oo aan qaabeyn karno.
Sida Sketch-ka, Farshaxanka wuxuu na siiyaa noocyo hore oo kala duwan oo aan awoodno si deg deg ah sawiradeena ugu rogno shiraac adoo adeegsanaya farsamooyin saliid, qalin, pastel ... kadibna aad awood u yeelan karto inaad la qabsato faahfaahinta ugu yar sida dhumucda istaroogyada burushka, qalinka, nooca xardhashada.
Farshaxanimada waxaa loo heli karaa iyada oo ah codsi keli keli ah ama iyada oo loo marayo Photoshop plug-in. Soosaaruhu wuxuu ku deeqayaa 10 maalmood si uu u hubiyo haddii dalabku sameeyo wixii uu ballanqaaday. Haddii aan aragno in natiijadu ay tahay mid wanaagsan oo aan dooneyno inaan marar badan isticmaalno, waa inaan dhex marnaa sanduuqa oo aan bixinaa 55ka euro si aad u hesho isaga plugin loogu talagalay Photoshop ama kaliya codsiga.
Sawirka Sawirka wuxuu noo ogolaanayaa inaan si deg deg ah ugu badalno sawirada aan jecel nahay sawirro sax ah, sawiro aan gadaal ka bedeli karno si aan ugu haboono baahiyaheena, sida hagaajinta qaabka sawirka, heerka faahfaahinta, xoojinta midabada ... codsiyada tayada leh ee noo oggolaanaya inaan sawirrada ugu beddelo sawirro, Khaanadda Sawirka waxaa lagu heli karaa bilaash si aad isugu daydo oo hubi haddii natiijadu ku habboon tahay baahiyaheena. Marka muddada tijaabada ay dhaafto, waa inaan iibsano haddii aan dooneyno inaan sii wadno isticmaalkeeda.
U beddel sawir sawir leh macOS
Codsi aad ufiican oo loogu badalo sawiradeena sawiro lagu sameeyay qalin ama biyo-biyood Iyada oo loo marayo qaabab kala duwan oo horay loo sii qeexay oo aan hadhow isku hagaajin karno si natiijadu u egtahay waxa aan raadineyno. Codsigan, oo sidoo kale loo heli karo Windows, Waxay leedahay qiimo dhan 68 euro oo waxaan ku heli karnaa qaab codsi madaxbanaan ama qalab loogu talagalay Photoshop, oo ah qalab kale oo aan wax ka qaban doonno qodobkan si aan ugu beddelno sawirradeena sawirro si dhakhso leh oo fudud.
Horaa loo yidhi: Haddii wax shaqeeyaan, ha taaban. Farshaxanimada waxaa soo diyaarisay isla shirkadda Sketch, laakiin kama duwana Sketch, Artwork waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah ugu badalno sawiradeena shiraacyo iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka saliida, pastel, gouache, watercolorApplication Codsigan, oo waliba loo heli karo Windows-ka, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku fulino hawsha beddelka qaybo badan, sidaa darteed haddii baahiyahayagu ay maraan beddelidda tiro badan oo sawirro ah codsigan ugu habboon.
Markaan raranno sawirka ama sawirrada aan dooneyno inaan u beddelno shiraacyo, waa inaan dooro nooca rinjiga waxaan raadineynaa, si aan hadhow natiijada ula jaan qaadno si aan u helno dhammadkii aan raadineynay. Sida Windows version-ka, Farshaxanka waxaa loo heli karaa sidii Photoshop-ku-xidho ama codsi kalidii ah. Labada xaaladoodba, horumariyaha wuxuu na siiyaa suurtagalnimada inaan ku tijaabino arjiga 10 maalmood, ka dib Waxaan bixin doonnaa 55-ka euro ee ay ku kacayso.
U beddel sawir sawir leh Photoshop
Photoshop waa qalab wax lagu saxo oo muhiim u ah xirfadle sawir kasta. Si aad awood ugu yeelatid in aad uga faa'iideysatid Photoshop waa inaad noqotaa khabiir run ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno inaan wax ka beddelno yar yar ama wax ka beddelno uma baahnid inaad noqotid indheer garad, maaddaama howlaha aasaasiga ah sida miirayaasha, ay heli karaan isticmaale kasta oo aqoon yar leh.
Si looga faa'iideysto miirayaasha farshaxan ee kala duwan ee barnaamijka Photoshop uu na siiyo, waxaan u aadnay Filters menu oo guji Filter Gallery. Marka xigta, sawirka aan furannahay wuu soo muuqan doonaa oo dhammaan shaandhooyinka farshaxanka ah ee aan ku dabakhi karno sawirkeenna ayaa lasoo bandhigi doonaa, miirayaal aan ku dari karno qaabab kala duwan, qaabab, xuduud ...
Waxaan sidoo kale awoodnaa ku dar plugins kala duwan, sida kuwa kor ku xusan, oo aan ku heli karno natiijooyin isku mid ah sida codsiyada kale, laakiin inta badan kiisaska waa la siiyaa. Si aan u raadino noocyada noocaan ah waa inaan raadino Google.
U beddelo sawir sawir shabakadda
Iyada oo loo marayo internetka waxaan sidoo kale awoodnaa sawirradeena u rog sawir, laakiin xulashooyinka habeynta dabcan si weyn ayaa loo dhimay. Beddel Sawirka waa mid ka mid ah adeegyadan, waa adeeg sawir u beddelaya qalin qurux badan ama saameyn sawir sida kan sawirka kore ku yaal.
BeFunky waa adeeg kale oo bilaash ah oo laga helo shabakadda taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan sawiradeena u rogno sawirro qurux badan. Si ka duwan Bedelka Sawirka, BeFunky waxay na siisaa fursado badan oo habeyn ah inaan isku dayno inaan helno natiijooyinka aan raadineyno.
sawir.ku waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa oo kaliya inaan codsanno miirayaal kala duwan si aan ugu beddelno sawirradeena sawirro, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan jarno sawirada, bedelno saturation, dhalaalka, soo-gaadhista... Markaan sawirradayada u roginno sawirro, waxaan ku dari karnaa looxyo kala duwan, qoraallo, waxaan ku dari karnaa saameyn ...
U beddel sawir si aad ula sawirto macruufka
Clips waa barnaamijka Apple rabto madaxaaga si toos ah ugu hagaaji, tafatirka aan dhib lahayn maahan kaliya fiidiyowyada laakiin sidoo kale sawirrada. Muuqaaladda waxaan ku abuuri karnaa fiidiyowyo xiiso leh qoraallo, miirayaal iyo emoticons. Laakiin shaqada ku darida miirayaasha sawirada waxay ka dhigeysaa codsi bilaash ah oo bilaash ah oo lagu isticmaali karo si loogu badalo sawiradeena shiraacyada, in kastoo aan heysano kaliya labo miirayaal.
Waterlogue waxaa loogu talagalay inay sawiradeena u rogo midabbo biyo qurux badan leh, sidaa darteed haddii aad raadineysid cod u rogaya sawirradaada sawir gacmeedka noocan ah, Waterloge ayaa ah dalabkaaga, waa codsi na siinaya 14 nooc oo horay loo dejiyay si aan shaqsiyan u sameysano abuuritaankeena adoo hagaajinaya heerka qoyaanka, dusha qalinka sida sidoo kale midabka. Markaan abuurnay abuurnimadeena waxaan ku dhoofin karnaa qaraar aad u saraysa si aan ugu daabacno baaxad weyn si pixels waaweyn aysan u noqon halyeeyada.
Thanks to ArtEffect waxaan awoodi doonnaa inaan u badalno sawirada aan jecel nahay sawirada la abuuray iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka Vang Gogh, Picasso, Salvador Dalí, Leonardo da Vinci... ArtEffect wuxuu na siiyaa ilaa 50 nooc oo kala duwan, qaababka farshaxanka, farshaxanka, prism, farshaxan ... Haddii aan nahay kuwa jecel rinjiyeynta oo aan marwalba jeclaan lahayn inaan ku sawirno sawirkaaga waxa aan jeclaan lahayn, codsigan waa macquul. ArtEffect ayaa loo heli karaa si bilaash ah oo laga soo dejisto, laakiin iibsiyada iyo calaamadeynta biyaha, wax iibsashada iyo calaamadeynta oo aan ka saari karno adeegsiga abka-iibsiga ee aad na siiso.
Prisma waxay ahayd mid kamid ah barnaamijyada ugu guulaha badan tan iyo markii ay gaareen dukaamada codsiyada moobiilka, runtiina, waxay sidoo kale noqotay mid kamid ah kuwa ugu badan ee ay bixiyaan labada shirkadood ee Apple iyo Google. Prisma waa tifaftire sawir oo noo oggolaanaya inaan ku dalbanno miirayaasha farshaxanka u rogno sawirada aan ugu jecelahay shiraacyada adigoo isticmaalaya qaabka Munch, Picasso iyo kuwo kale oo badan. Prisma waxaa lagu heli karaa bilaash si bilaash ah. Markaan abuurno shiraacyadayada, waxaan ku keydin karnaa mashiinka qalabkayaga, ku dirno emayl ama waxaan si toos ah ugu daabici karnaa shabakadaha bulshada.
Tifatiraha Sawirka Prismafree
PhotoViva waxay noo ogolaaneysaa inaan u badalno sawirada aan jecel nahay shaqooyin farshaxan oo muujiya oo midabo badan leh. Waxaa ka mid ah qalabka naga caawinaya hagaajinta beddelaadyada waxaan ka helnaa burushyo cabbirro kala duwan leh si ay u bixiyaan natiijooyin aad u wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan bedelno midabka midabka, dhererka, isku-buuqa nabarrada burushka ...
PhotoViva Arte - Tifatiraha Sawirka & Saamaynta Burushka4,99
Brushstroke waxay sawiradeenna ugu beddelaysaa rinjiyeyn qurux badan oo hal taabasho oo keliya ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaadaan inaan saxiixno oo aan la wadaagno natiijooyinkeena shabakadaha bulshada ee ugu muhiimsan. Brushstroke waxaan u rogi karnaa sawiradeena qaababka kala duwan ee rinjiyeynta, ku tijaabiso jajabyo kala duwan, hagaaji natiijooyinka la helay ...
U beddel sawir sawir leh Android
Sidoo kale waxaa laga heli karaa Apple App Store for iPhone, waa mid ka mid ah codsiyada bilaashka ah ee bixiya natiijooyinka ugu fiican nidaamka deegaanka ee Android si deg deg ah oo dadaal la'aan ah loo abuuro shaqooyin aad u fiican iyadoo la adeegsanayo qaabka farshaxan yahannada ugu waa weyn ee waqtiga oo dhan iyada oo ay ugu wacan tahay isku darka shabakadaha neerfaha iyo sirdoonka macmalka ah
Tifatiraha Sawirka Prisma
Developer: Shaybaadhka Prisma, Inc.
In kasta oo aan si fiican loo aqoon ama loo qiimeyn sida Prisma, Vinci wuxuu na siiyaa xitaa natiijooyin ka wanaagsan kii horeTan iyo markii aan dooranay shaandhada farshaxanka ee aan dooneyno, waxaan ku dari karnaa saameyn kala duwan si aan ugu hagaajinno natiijada baahideena iyo dhadhankeena. Intaas waxaa sii dheer, maadaama aan codsaneyno miirayaal cusub, waxaan isbarbar dhigi karnaa natiijada iyo kuwii hore, si aan si dhaqso leh ugu awoodno inaan ogaano midka ugu fiican.
Vinci - AI miirayaasha sawirka
Sawirka Sifeeyaha Farshaxanka
Sawirka Farshaxanka Farshaxanka waa codsi kale oo na siiya natiijooyin aad u wanaagsan marka ay timaaddo u-beddelashada sawirrada aan jecel nahay shiraac quruxsan oo macquul ah. Haddii aad raadineysid codsi ku siinaya adiga natiijooyin aad ula mid ah kuwa sawir ah, Sawirka Farshaxanka Farshaxanka ayaa ah dalabkaaga. Waad ku mahadsan tahay tirada badan ee miirayaasha, lambar aan ku ballaarin karno adigoo wax badan kala soo degsanno arjiga, way adkaan doontaa in la waayo shaandhada aan raadineyno si loo abuuro shiraacyadeenna ugu fiican ama rinjiyeynta.
Tifatiraha Sawirka Farshaxanka: Filtarka Sawirada & Rinjiyeynta
Developer: Studio Studio Lyrebird
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida sawir loogu rogo sawir
Samsung waxay leedahay Bixby Voice lama heli doono ilaa dhamaadka guga
Nooca xiga ee OnePlus ayaa ku dari doona Snapdragon 835